I-Chaco Canyon: Intliziyo Yomsebenzi we-Anasazi
Indawo yase-Ancestral Puebloan
I-Chaco Canyon yindawo eyaziwayo yezinto zakudala e-America aseMerika. Itholakala kummandla obizwa ngokuba yiMine Corners, apho i-Utah, iColorado, iArizona, ne-New Mexico idibana nayo. Lo mmandla wawugcinwe ngokusemthethweni ngabantu base-Ancestral Puebloan (eyaziwa ngokuba ngu- Anasazi ), kwaye ngoku iyingxenye yeCaco yeNational Historical Park. Ezinye zezona ziqithi ezidumileyo zeChaco Canyon ziyi: Pueblo Bonito , iPññasco Blanco, iPueblo del Arroyo, iPueblo Alto, Una Vida kunye noChetro Kelt.
Ngenxa yezakhiwo zobugcisa obugcinwe kakuhle, iChaco Canyon yaziwa kakuhle ngabantu baseMelika baseMelika (amaqela aseNavajo ahlala eChaco ukususela kwi-1500s), ama-akhawunti aseSpeyin, amagosa aseMexico kunye nabahamba phambili baseMelika.
Uphando kunye noPhando lwezinto zakudala zeChaco Canyon
Ukuhlolwa kwezinto zakudala kwiChaco Canyon kwaqala ekupheleni kwekhulu le-19, xa uRichard Wetherill, umculi waseCoronto, noGeorge H. Pepper, umfundi wezinto zakudala waseHarvard, beqala ukumba e-Pueblo Bonito. Ukususela ngoko, inzala kule ndawo iye yakhula ngokubanzi kwaye iiprojekthi ezininzi zezinto zakudala ziye zaphanda zaza zazingca iziza ezincinci kunye ezinkulu kwiindawo. Imibutho kaZwelonke efana ne-Smithsonian Institution, i-American Museum ye-Natural History kunye ne-National Geographic Society nayo yonke imfuyo echongiwe kwingingqi yeKhaco.
Phakathi kwabaninzi abaqaqambile be-archaeologists abasemzantsi-ntshona abaye basebenza eCaco nguNeil Judd, uJim W.
Umgwebi, uStephen Lekson, R. Gwinn Vivian, noTomas Windes.
I-Chaco Canyon yinkangala enomileyo kwaye eyomileyo ehamba kwiSan Juan Basin enyakatho-ntshona yeNew Mexico. Imifuno kunye nemithombo yamatye ayinqongophala. Amanzi asweleka kwakhona, kodwa emva kwemvula, umlambo weChaco ufumana amanzi aphilileyo aphuma phezulu kwintlambo ejikelezileyo.
Oku kucacile indawo ebalulekileyo kwimveliso yezolimo. Nangona kunjalo, phakathi kwe-AD 800 no-1200, amaqela angama-ancestral puebloan, amaChaka, ayenze ukudala inkqubo yenkcubeko yeenkalo ezincinci kunye namaziko amakhulu, iinkqubo zokunkcenkceshela kunye neendlela ezidibeneyo.
Emva ko-AD 400, ukulima kwakusungulwe kakuhle kwingingqi yaseChaco, ngakumbi emva kokulima ummbila , ubhontshisi kunye nekotishi (" oodade abathathu ") badibaniswa nezixhobo zasendle. Abemi basekuqaleni baseChaco Canyon bamkela kwaye bahlakulela indlela eqokelelweyo yokuqokelela ukunkcenkceshela nokulawula amanzi aphilileyo ukusuka kwiindawo zamanzi ukuya kwamadamesi, emigodini, nasemasimini. Lo mkhuba - ngakumbi emva kwe-AD 900 - avunyelwe ukwandiswa kweedolophana ezincinci kunye nokudala izakhiwo ezinkulu zokwakha izakhiwo ezibizwa ngokuba ziindawo ezinkulu zendlu .
Indlu encinci kunye neendawo ezinkulu zeNdlu eChaco Canyon
Abaphengululi be-Archaeologists basebenza eChaco Canyon babiza le mizana encinci "iindawo ezincinci zendlu," kwaye zibiza ngamaziko amakhulu "indawo ezinkulu zendlu." Izindlu ezincinci zinezindlu zingaphantsi kwamagumbi angaphantsi kwe-20 kwaye zineendaba ezinye. Akunaso i-kivas enkulu kwaye iiplazas ezifakwe kwiindawo ezinqabileyo. Kukho amakhulu ezindawo ezincinci eChaco Canyon kwaye zaqala ukwakhiwa ngaphambi kweendawo ezinkulu.
Izakhiwo ezinkulu zeNdlu zizakhiwo ezinkulu ezinamaqela ahlanganiswe ngamagumbi adibanayo kunye neeplazzi ezifakwe kunye okanye enye i-kivas enkulu. Ukwakhiwa kweziza ezinkulu zendlu ezifana nePueblo Bonito , uPeñasco Blanco, kunye noChetro Ketl zenzeke phakathi kwe-AD 850 no-1150 (iiPueblo ii-II kunye no-III).
I-Chaco Canyon ineemveliso ezininzi ze- kivas , izakhiwo ezingezansi-komhlaba ezisetyenziswa ngabantu abaninzi banamhlanje. I-Chaco Canyon ye-kivas ijikelezwe, kodwa kwezinye iindawo zasePuebloan zingaba zikwele. I-kivas eyaziwa kakuhle (ebizwa ngokuba yi-Great Kivas, kwaye idibene neendawo ezinkulu zeNdlu) yakhiwa phakathi kwe-AD 1000 no-1100, ngexesha leClass Bonito.
Funda kabanzi nge- Kivas
I-Chaco Canyon ikwadume kakhulu kwinkqubo yeendlela ezidibanisa ezinye izindlu ezinkulu kunye nezinye iindawo ezincinci kwakunye neendawo ezingaphaya kwe-canyon.
Le ntanethi, ebizwa ngokuba yi-archaeologists kwi- Chaco Road System ibonakala ibenomsebenzi kunye nenjongo yonqulo. Ukwakhiwa, ukugcinwa kunye nokusetyenziswa kweendlela zeendlela zeChaco kwakuyindlela yokudibanisa abantu abahlala kwintsimi enkulu kwaye babanike ingqiqo yoluntu kwakunye nokuququzelela ukunxibelelana kunye nokuhlanganiswa kwexesha.
Ubu bungqina obuvela kwi-archeology kunye ne- dendrochronology (umtshini wokuthandana kwemithi) lubonisa ukuba umjikelezo womlambo omkhulu phakathi kwe-1130 no-1180 uhambelane nokuhla kwe-system ye-Chacoan yesithili. Ukungabi nolwakhiwo olutsha, ukushiya ezinye iindawo kunye nokunciphisa okubonakalayo kwizibonelelo ngo-AD 1200 kubonisa ukuba le nkqubo yayingasasebenzi njengeyona node ephambili. Kodwa isimboli, izakhiwo kunye neendlela zenkcubeko yaseChacoan zaqhubeka iminyaka embalwa ukuba, ekugqibeleni, kuphela imemori yexesha elidlulileyo kwixesha elizayo.
Cordell, uLinda 1997. I-Archaeology yaseMzantsi-ntshona. Uluhlu lwe sibini. I-Press Press
Pauketat, uTimoti R. kunye noDiana Di Paolo Loren 2005. I-North American Archeology. Blackwell Publishing
Vivian, R. Gwinn noBruce Hilpert 2002. I-Chaco Handbook, i-Encyclopedic Guide. IYunivesithi yase-Utah Press, iSouth Lake City
Iidolophu zamandulo zamaSilamsi: iiNqila, iiDolophu kunye namaKapa aseSilamsi
Ukuhlaliswa kweViking: Indlela iNorse yahlala ngayo kwiindawo eziLwandle
Izixhobo ze-Royal Cemetery yase-Uri
UMiriyam - udade kaMoses